Chelsea oo xaqiijisay inay la soo wareegtay ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England Ben Chilwell – Xidigaha
Kooxda Chelsea ayaa dhameystirtay saxiixa xiddiga heerka caalami ee dalka England Ben Chilwell oo ay kala soo wareegeen kooxda Leicester City .
23-sano jirkan ayaa qalinka ku duugay heshiis shan sano ah oo uu ku joogayo garoonka Stamford Bridge kaas oo lagu doonayo in lagu qiimeeyo 50 milyan oo gini.
Chilwell ayaa noqonaya saxiixii seddexaad ee Chelsea xagaagan ka dib markii ay yimaadeen Hakim Ziyech iyo Timo Werner , halka heshiisyada Thiago Silva , Kai Havertz iyo Malang Sarr sidoo kale la filayo inay dhameystiraan.
“Waan ku faraxsanahay inaan ku biiro Chelsea waqtigan aadka u xiisaha badan ee kooxda,” Chilwell ayaa u sheegay webka rasmiga ah ee Chelsea.
Waxaan rajeynayaa inaan qeyb ka noqdo kooxdan da ‘yarta, ee firfircoon ee uu hogaaminayo Frank Lampard sida aan ugu tartameyno sharfida xilli ciyaareedka soo socda. ka hor kulanka taageerayaasha Chelsea ee Stamford Bridge. ”
Agaasimaha kooxda Chelsea Marina Granovskaia ayaa intaa raaciyay: “Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dhameystirno xidiga seddexaad oo aan ku soo kordhinay kooxdeena xiisaha badan xilli ciyaareedka soo socda. da ‘.
“Waxaan kalsooni ku qabnaa inuu Ben si dhaqso leh ula qabsan doono inuu noqdo ciyaaryahan Chelsea ah isla markaana barnaamijka isku diyaarinta xilli ciyaareedka 2020-21.
Chilwell wuxuu soo maray safka Leicester wuxuuna u ciyaaray 123 jeer kooxda koowaad, waxaa intaas u dheer in uu 11 kulan la qaatat England ah.
Be the first to comment on "Chelsea oo xaqiijisay inay la soo wareegtay ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England Ben Chilwell"